Mpahandro Sakafo “Tian” i Valdimir Putin Indrindra: Voarohirohy Amin’ny Fanafihana Mpanao Gazety sy Mpikambana Amin’ny Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Mpahandro Sakafo “Tian” i Valdimir Putin Indrindra: Voarohirohy Amin'ny Fanafihana Mpanao Gazety sy Mpikambana Amin'ny Mpanohitra
Voadika ny 15 Jolay 2016 14:35 GMT
Vladimir Putin sy ny mety ho ilay mpahandro sakafo tiany indrindra, ankoatra i Evgeny Prigozhin. Sary avy amin'i Kevin Rothrock.
Efa fanafihana nihoatra ny antsasaky ny ampolony no nitranga tamin'ireo mpikatroka mafana fo ara-politika tao St. Petersburg nanomboka ny fiandohan'ny taona. Vaky ny karandohan'ny lehilahy iray. Potika ny tarehin'ny iray. Betsaka ny olona no very fiara tamin'ny fanafihana-fandoroana. Olona am-polony maro no nampijaliana sy norahonana an-tserasera. Mpikambana tao amin'ny mpanohitra an'i Kremlin ao Rosia ireto niharam-boina ireto, olon-tsotra ry zareo fa tsy ny mpitarika ny hetsika.
Mieritreritra ireo niham-boina fa voakendry noho ireo lahatsoratra sy sary nozarainy tany amin'ny tambajotra sosialy izy ireo. Io, araka ny fahitana azy, dia ampy nandranitana ireo sasany tsy mitonona anarana, milaza ny tenany ho ”tia tanindrazana.”
Mandraka ankehitriny dia mbola miteraka fifantohana kely eo amin'ireo haino aman-jery ireo fanafihana tany Rosia. Ny farany, niezaka nifankahita an-tserasera ireo telo niharam-boina. Tao aorian'ny fifampiresahana sy ny nahatsapàna fa nokendrena tao anatina fanafihana misy antony ry zareo, dia nanantona ny gazety tsy miankina Novaya Gazeta. Tamin'ny faran'ny May teo, nizara ny tantaran'i Danila Aleksandrov ( Mpilatsaka an-tsitrapo hanara-maso ny fifidianana ), Yulia Chernobrodova (mpikatroka), ary Aleksander Markov ( DJ fahiny izay ankehitriny mitantana ny vondom-piarahamonina anaty aterineto ”Heloka Bevava Fitantanam-pitondrana”, manohitra ny ao Kremlin). Efa noraisin'ny Polisy ny fepetra mikasika ireo fanafihana ireo, fa tsy nisy vokany.
Tany am-piandohan'ny volana Jona 2016, ny tranonkalam-baovao Meduza dia nizara tatitra mikasika ny fanafihana nanjo an'i Aleksandrov, Markov, ary ireo hafa tao St. Petersburg, nahatsikaritra fa ireo mpanao ratsy dia mampiasa loharanom-baovao iraisana mba hanomanana ny fanafihana: tranonkala antsoina hoe ‘Who Is Who – Iza no Iza,” izay manolotra ny tenany ho tranonkala Okrainiana nanahy ny amin'ireo mpiasam-panjakana sy ireo mpanao politika izay tonga teo amin'ny fitondrana taorian'ny revolisiona Euromaidan. “Iza no Iza” dia manana karazana votoatiny roa lehibe: antontan-taratasy mikasika ireo Okraniana mpanao politika , ary tantaram-baovaon'ireo mpankafy an'i Kremlin.
Tato ho ato, nikarakara fifaninanana mihitsy aza ilay tranonkala, nanome toky fa handoa 500 roubles (8$ fotsiny) isaky ny tatitra ”sarobidy”. Ao amin'ny “Iza no Iza“, dia afaka ahitanao karazana angond-drakitra manokana momba ireo Okraniana mpanao politika sy ireo Rosiana mpikatroka mafana fo mpanohitra an'i Kremlin, anisan'izany ny nomeraon'ireo mpandoa hetra, ny sariny, ny adiresin'ny tranony, ary ny anaran'ny havany. Sokajian'ilay tranonkala ho ao anaty ”lisitra fotsy” sy ”lisitra mainty” ireo karazan'olona ireo. Afaka hita ao amin'ny lisitra maintin'ny “Iza no Iza” ireo niharam-boina tao St.Petersburg.
Nandritra ny volana maromaro, tsy dia nisy porofo mivaingana ny mampifandray ny “Iza no Iza” amin'ny fanafihana natao tamin'ireo mpikatroka mafàna fo, ary mety ho marina fa naka aingam-panahy na koa nitaratra ny fampitahorana mitohy ankehitriny manjo ireo mpitsikera an'i Kremlin. (Fahita matetika ireo vondrona mpankahala izay manetsika amin'ny alàalan'ny aterineto, any Rosia sy any an-kafa.)
Tamin'ny 21 Jona, ny mpiandraikitra ny BBC amin'ny fiteny Rosiana dia nizara fanadihadiana momba ny tetikasa ”Iza no iza”. Hitan'ireo mpanao gazety ny vehivavy iray efa niasa taminà masoivoho PR ary nokaramain'ny ”Wikiblogger”, ilay tena “Iza no Iza” niandohana. Nilaza izy fa zara raha voarindra ny tetikasa, tamin'ny filazàna fa niala ny ankamaroan'ny mpiasa rehefa nanomboka nandeha be ny vola tamin'ny 2014. Io vehivavy io dia niteny fa vehivavy antsoina hoe Yekaterina Petayeva no lehiben'ny tetikasa .
Nifandray tamin'i Petayeva i Andrei Soshnikov avy ao amin'ny BBC, izay tsy nanamarina hafa tsy ny naha-mpiasa tena azy tao amin'ny Wikiblogger nandritra ny iray volana, na dia niteny aza ireo mpanao gazety fa manana porofo ny naha-mpiasa azy tao nandritra ny enim-bolana raha kely indrindra. Niteny i Petayeva fa tsy afaka nitadidy ny anaran'ireo mpiara niasa taminy tao amin'ny Wikiblogger, ary nandà ny hilaza ny anaran'ilay olona nanakarama azy mba hanapongatra ny mombamomba ireo mpikatroka. Nandrahona ny hitory ny BBC ihany koa izy.
Ny vondrona an-tserasera tsy mitonona anarana ”Anonymous International’‘ dia nanaporitsaka mailaka mikasika ny Wikiblogger. Araka ny sasany amin'ireo hafatra ireo, ny tetikasa dia nahazo fanampiana ara-bola tany amina olona akaiky an'i Evgeny Prigozhin, mpanankarena tompona orinasa mpanao sakafo izay fantatra be ho toy ny ”mpikarakara sakafon'i Vladimir Putin manokana”. i Prigozhin dia ahiana ihany koa ho nanampy ara-bola ilay ”orinasa mpanao Troll” (fanesoana) malaza ratsy miasa any ivelan'ny St. Petersburg, manaparitaka eraky ny haino aman-jery sosialy ny votoatin-kafatr'ireo mpankafy an'i Kremlin.
Tany am-piandohan'ity volana ity, nametraka fitoriana am-polony manohitra ny tambajotram-pikarohana Yandex i Prigozhin, mitady ny hampiasa ilay lalàna Rosiana vaovao ”zo hohadinoina.” Mangataka ny hanesorana ireo voka-pikarohana mamatotra azy amin'ireo tatitra hoe nanampy ara-bola ilay orinasam-panesoana izy, ireo tatitra momba ireo raharaham-barotra mampiahiahy nataony (indrindra mikasika ireo fifanarahana ara-barotra ifanaovana amin'ny fanjakana), ary ireo maro hafa. Ny tranonkalam-baovao Fontanka ao St. Petersburg dia nanome fikarakarana manokana ny ”fanjakana” tsy maharikorikon'i Prigozhin.
Ny volana May 2016 lasa teo, nizara sarin'ny polisy nitàna ny fandalovan'ireo fiara nitandrozotran'i Prigozhin ny Fontanka, mampiseho ny fomba fampiharana ny lalàna tamin'ny fanalàna teo anoloan'ny fiarany ny ‘sirène’ tsy ara-dalàna ( izay fampiasan'ny manampahefana Rosiana eny anaty fifamoivoizana). Tamin'ny 21 Jona, nizara tatitra miampanga an'i Prigozhim ho mpitarika fitsikilovana manohitra ireo mpanao gazetiny, ary koa fanafihana an-tserasera nikendry ny hangalatra ny rakitra mombamomba ireo mpanangom-baovao ilay tranonkala. Iray tamin'ireo tratran'ireny fanafihana ireny i Denis Korotkov, mpanangom-baovao ao amin'ny Fontanka izay nampibaribary ny andraikitr'i Prigozhin ao amin'ilay ”orinasam-panesoana,” ny fifanarahana mampiahiahiny iarahany amin'ny tafika, ary ireo raharaham-barotra any amin'ireo toerana toa an'i Syria sy i Okraina. Nanoro ihany koa ny Fontanka fa mety mamatsy vaovao ho an'ireo mpanafika ny mpikatroka sy ny mpanao gazety ihany koa ny polisy. Marihana fa dimy amin'ireo orinasan'i Prigozhin dia manampahefana fahiny mpampihatra lalàna no mitantana azy.
Tamin'ny 24 Jona, ny mpitondra tenin'i Kremlin, Dmitry Peskov, dia niteny fa tsy hanadihady momba ny fiampangana an'i Prigozhin ireo Rosiana manampahefana, miantso ilay fiampangana ho toy ny fanalana baràka ”tsy marim-pototra”.